Nhau - Maitiro ekubatanidza sei clutch uye throttle?
Nzira yekugadzirisa sei clutch uye throttle?
Nzira yekushandira pamwe ne clutch uye throttle?
Kutanga, giya rinofanira kunge riri munzvimbo isina kwayakarerekera. Mushure mekutanga mota, shungurudza batira kusvika kumagumo, wozoisa giya munzvimbo yekutanga yegiya. Ipapo sunungura batira. Kana uchisunungura batira, nonoka. Kana iwe uchinzwa mota ichizununguka zvishoma uye Mushure mekutanga kuenda kumberi, zvishoma nezvishoma kuwedzera mafuta, uye panguva imwe chete, ramba uchisunungura batira kusvikira yanyatsoburitswa uye mota yatanga mushe. kuchinja
Kana tichida kupfeka giya repamusoro, tinofanirwa kuenzanisa kumhanya kweiyo giya rekutarisa, saka tinofanirwa kuwedzera kumwe kurira kuti mhanyisa isvike kumhanya kweiyo giya (semuenzaniso, kana giya iri mu5 giya, iyo inomhanya inofanirwa kusvika makumi mashanu mayadhi kana kupfuura). Kamwe kumusoro, isu tinogona kutsika pane batira, kuisa giya, uyezve toburitsa batira (iyo inomhanyisa inogona kuwedzerwa), uye panguva imwechete iyo throttle inoramba ichikwira kuti ichengete kumhanya munzvimbo yakagadzikana.
Maitiro ekushandira pamwe neiyo clutch uye iyo yekudonha kana uchideredza uye uchichinja?
Paunenge uchida kudzikisira pasi, unofanirwa kutanga wadzikisa kumhanya. Isu tinotanga kutsika pamabhureki kuti tinonoke, gadzira iyo yekuwedzera tsoka nerutsoka rwerudyi, simudza rutsoka rwerudyi, nekukasira kutsika pane chinonamira, uye chinja giya lever kune inoenderana giya. , Regedza chinobatirira chitiviri, uye uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge waita.
1. Chikonzero chekutanga flameout ndechekuti batira rinosimudzwa nekukurumidza.
Kana 1 kusvika 2 isina chinhu, haizodzime kana iwe uchisimudza, uye ichatanga kubatirira mushure me2 kusvika ku3, saka unofanirwa kuisimudza zvishoma nezvishoma kana iri 2.
Paunenge uchisimudza kusvika ku2, zvishoma wedzera kubhidha nenzira yekudzikisa huwandu hwematanga, (refueling uchisimudza batira) haina zvainoita. Iko kutanga kwese.
2. Simba regiya rechipiri rinogona kukwira migwagwa yemakomo, uye kumhanya kwacho kunogona kudzorwa nehafu-inodzvinyirira batira mune yechipiri giya. (Muchiitiko chekumhanya U-kutendeuka kumhanya). Kana iyo U-dzoka kumhanya ichikurumidza kana kunonoka, shandisa 1 giya kuidzora.
3. Speed ​​inomhanya chaizvo uye mota haimiswe. Kuti udzikise, shungurudza batira, uye kuti ikurumidze, wedzera iyo yekuwedzera. Under kwomuzvarirwo ezvinhu, wekushanduka inodzorwa 2 rachulis.